Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo darajada sareeye Guuto u xiray gabadhii ugu horaysay ee ciidamada Booliska Soomaaliya. – The Voice of Northeastern Kenya
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo darajada sareeye Guuto u xiray gabadhii ugu horaysay ee ciidamada Booliska Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali khayre oo wakiil ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda fedraalka, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa darajada Sarreeye Guuto u xiray Zakiya Xuseen Axmed oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee darajadaas ka gaarta ciidanka dowlada Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha ayaa haweenka Soomaaliyeed ku bogaadiyay kaalinta ay kaga jiraan dib u dhiska dalkooda, isagoo sheegay in waqti dheer ay dadaal ugu soo jireen horumarinta qarannimada Soomaaliya ayna muhiim tahay in dumarka Soomaaliyeed loo qiro guulaha ay dalkooda u horseedeen.
16-kii bishaaan Agoosto ayaay ahayd markii Madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) uu darajada Sarreeeye Guuto u dallacsiiyay Zakiya Xuseen Axmed una magacaabay taliye ku-xigeenka ciidamada Booliiska Soomaaliyeed, waxayna xiligaasi noqotay gabadhii ugu horreysay ee derejadaas ka gaarta ciidamada ammaanka dalka Soomaaliya.
← DHAGEYSO Gudiga adeega Garsoorka Soomaaliya oo la soo dhisayo.
DHAGEYSO Xildhibaan soo jeediyay in xubnaha guddiga IEBC la kala diro →